Ahoana no amporisihako manokana ny fahaizan'ny zanako?
Ny fanabeazana dia azo zarina toy ny hozatra!
Famoronana amin'ny alàlan'ny pejy fandokoana
Ny ray aman-dreny dia maniry ny tsara indrindra ho an'ny zanany foana. Vao tsy ela akory izay, ankoatry ny toetra irina toy ny fahaleovan-tena, fahazotoana, fifantohana ary faharanitan-tsaina, dia nitombo ihany koa ny ezaka hampiroboroboana ny famoronana ny zanaky ny tena. Avy aiza anefa io fiovam-po io?
Misy Famoronana ary ahoana ny fomba fampiroboroboana izany amin'ny ankizy?
Taloha, ny mpanakanto dia mamorona manokana sy tsy azo iadian-kevitra, saingy tsy nety ny fomba fiainany, satria matetika no nitarika ho amin'ny fahasimban'izy ireo manokana, na mbola ratsy kokoa aza, ho any amin'ireo honahona fanafody hallucinogenika. Soa ihany, ny fomba fijery dia niova ho an'ny famoronana ankehitriny, toa saika endrika famelana ny ankizy hanome fahalalahana betsaka araka izay azo atao amin'ny fizotry ny famoronana.
Amporisiho ny famoronana ao amin'ny ankizy - © yanadjan / Adobe Stoc
Mampifaly anao ny fahaiza-mamorona, izany no mahamaika ny ray aman-dreny rehetra - saingy marina izany. Saika tsy misy zavatra mahasambatra ny olona iray, satria ny olona iray dia miaina hatrany ny asany amin'ny famoronana. Ary izany indrindra no manatanjaka ny fahatsiarovan-tena ny ankizy!
Ny mamorona dia mamorona zavatra tsy misy dikany
Ny famoronana dia dingana famoronana, ny teny dia avy amin'ny latina creare, izay midika hoe: mamorona zavatra, mamorona zava-baovao, manamboatra. Amin'io lafiny io, mamokatra foana ny famoronana. Raha misy koa ny crescere latina, izay midika zavatra toa ny "mitombo ka avelao hitranga", dia misy ihany koa ny passivity sasany.
Amin'ny fiteny tsotra dia midika izany fa ho an'ny dingan'ny famoronana aloha dia misy hetsika ahetsiketsika, avy eo jerenao izay mivoatra avy aminy ary, amin'ny tsara indrindra, alaivo ao anaty rafitra voafehy izy io. Ho an'ny ray aman-dreny dia midika izany fa avelany irery hanao zavatra maro ny zanany. Ity no fomba tsara indrindra hampiroboroboana ny famoronana.
Ny famoronana dia takiana amin'ny fiainana matihanina ankehitriny, ary tsy amin'ny lamaody sy fampirantiana ihany fa amin'ny orinasa ihany koa. Ireo olon-dehibe izay mieritreritra ivelan'ny boaty dia mpandala ny vaovao hatrany!
Voalohany ny vaovao tsara. Ny olombelona dia zavaboary mamorona. Ny famoronana dia voajanahary amin'ny lafiny sasany. Na ny ankizy kely aza dia mamorona tokoa raha ny fananganana sandcastles na ny fironana farany amin'ny fitambaran-akanjo. Thomas Rath dia azo antoka fa hirehareha amin'ny fitambaran'ireo ba kiraro misy volo misy zipo miloko sy bloka polka teboka.
Zava-dehibe ny tsy hananaranao ny zanakao amin'ny zavatra niainany. Raha tiany ny mitambatra, maninona? Ny famoronana dia fiampitana fetra foana, manao zavatra hafa noho ny hafa. Raha tsy izany dia misy fomba tsy tambo isaina hamelana ny zaza hamorona famoronana: manomboka amin'ny lambam-pandriana misy servieta sy labozia nofidiny ka hatramin'ny fakana sy famolavolana fehezam-boninkazo ho an'ny tantarany manokana. Derao ny zanakao amin'ny hevitra mamorona, mazava ho azy ao anatin'ny rafitra mety!
Fantaro ny talenta!
Ny ankizy dia mampiseho fahaizana manokana ho an'ny talenta iray dieny mbola kely. Ny zaza iray dia afaka mandoko tsara, ny iray hafa afaka mitendry piano, ary ny iray kosa efa namolavola couture haute tamin'ny faha-enina taonany. Tohano ny talenta rehefa mahatsapa azy ireo amin'ny fampianarana na lesona ianao, raha toa ka izany koa no fanirian'ny zaza. Aza terena na inona na inona, satria mandeha ho azy foana ny famoronana. Iray amin'ireo fitsipiky ny fototr'izy ireo izany, raha lazaina.
Azo zarina ihany koa ny fahaiza-mamorona. Mora azo izany. Alao an-tsaina hoe te-hamorona akanjo fampakaram-bady ianao nefa mbola tsy nahita an'izany mihitsy. Jereo izao maodely 50 mahery. Amin'izao fotoana izao dia manana hevitra ianao ny amin'ny fomba fanaovana akanjo fampakaram-bady mba hanavahana ny tenany amin'ny akanjo hafa.
Avelao hilentika ireo fahatsapana ireo. Telo andro angamba. Tsy mieritreritra ny akanjo intsony ianao, fa efa miasa kosa ny sainao. Rehefa afaka telo andro, mipetraha eo alohan'ny taratasy kely iray ary atombohy. Mazava ho azy fa hampiasa ny toetran'ny akanjo kasainao hatao ianao. Izay tianao Fa indraindray kosa dia mahazo hevitra vaovao ianao. Mampifangaro zavatra izy ireo, ny sasany amin'izy ireo dia mety ho vaovao tanteraka. Avy eo izany dia ny famoronana. Toy izany koa no tsapan'ny zanakao. Matetika dia tsy maintsy manangona fahatsapana be dia be aloha izy vao afaka mamorona tena avy amin'ny tsinainy!
Hamarino tsara fa manana tontolo iainana miaraka amin'ny fanentanam-panahy maro ianao. Fofona, loko, endrika, lalao, natiora, biby - fa azo antoka ihany koa fa misy vanim-potoana fitsaharana ahafahana manodina ireo fahatsapana ireo! Amin'izao androntsika izao dia miatrika fakam-panahy maro ny ankizy. Na ny ankizy kely tsy afaka mandeha akory aza dia faly fotsiny manatratra finday sy tablette.
Miaraka amin'ny fivoarana nomerika ankehitriny, ny hetsika izay nataon'ny ankizy 20 na 30 taona lasa izay dia nihemotra tany aoriana. Ny ankamaroan'ireny hetsika nentin-drazana ireny dia tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny ankizy.
Izy io dia mihatra amin'ny fivoaran'ny motera sy ny kognita. Ny sary hoso-doko dia hetsika lehibe eto. Ny fanaovana hoso-doko dia tsy zava-dehibe ho an'ny ankizy hanamafisana ny fahaizany mamorona, fa ny ankizy koa mankafy azy io fatratra. Satria amin'ny alàlan'ny fandokoana dia afaka mamorona zavatra ianao.
Ary ity hetsika famoronana ity dia tsy mahasoa fotsiny ho an'ny ankizy kely, fa manampy ny olon-dehibe hiala sasatra sy hikatsaka fialamboly mahafinaritra koa.
Fahaizana amin'ny fampandrosoana matihanina
Zava-dehibe indrindra ho an'ny ankizy ny fanaovana hoso-doko satria mampianatra azy ireo fahaiza-manao sy fahaiza-manao izay hanampy azy ireo amin'ny fiainana any aoriana. Andeha isika hieritreritra, ohatra, ny amin'ny tontolo matihanina atrehin'ity ankizy ity.
Ohatra, raha miafara amin'ny departemantan'ny marketing amin'ny orinasa iray ny zaza indray andro, dia miatrika asa maro izay mitaky famoronana izy ireo. Ireo asa ireo dia mety ahitana, ohatra, fanaovana anarana marika ary mametraka azy ao an-tsain'ny mpanjifa. Entana hampiroboroboana, toy ny amin'ny Maxilia.
Amin'ny lafiny lehibe, dia tratra izany amin'ny alàlan'ny fanentanana amin'ny maso. Raha misy olona efa nahavita hetsika famoronana maro, toy ny hosodoko, nandritra ny androm-piainany dia ho mora kokoa ho azy ireo ny mandrafitra ny marika ho an'ny marika noho ny olona mbola tsy nanohy hetsika famoronana. Raha sarotra amin'ny zaza ny manomboka mandoko samirery ary tsy misy torolàlana, ny pejinay fandokoana dia mety amin'ny fampahafantarana azy ireo ny sary hosodoko.
Misy pejy maro loko isan-karazany ao amin'ny tranonkalantsika izay azon'ny ankizy misafidy araka ny tiany sy ny tiany.
Pejy fandefasana lamaody modely maody
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 25. Jona 2021 15. Jolay 2021 Sokajy Fampianarana, akaninjaza & sekoly, LifestyleKeywords Tinker, Talent, fampianarana, ankizy, famoronana, mahaiza mamorona, famoronana, Mandoko, Pejy fandokoana, Talent
indray Lahatsoratra taloha: Snacking - inona ary ohatrinona no avela?
more Lahatsoratra manaraka: Famonoana tsy misy hena | Mihinana zava-pisotro